E nwere ọtụtụ ndị na-aghaghị ịdị na-eche, nke otu na-ahọrọ n'etiti MPC na VLC Media Player. Ọtụtụ ndị na-dị ka tụnyere ga-achọ ụfọdụ isiokwu ebe ndị a ma Ike Media Player s abịa isi na isi ma jiri ya tụnyere onye ọ bụla mma tinyere n'akụkụ. Lee, anyị bụ na otu isiokwu, atụnyere ndị a ma ọmarịcha Media Players; na-elekwasị anya niile isi atụmatụ na ihe ọ bụla ọzọ zuru ezu, nke anyị nwere ike.
Part 2: MPC (Media Player Omuma) Media Player
Part 3: 3 ma ama reviews banyere MPC
Part 4: 3 ma ama reviews banyere VLC
VLC Media Player, achọghị ịzụ kasị mmasị Media ọkpụkpọ na otu onye nke kasị eji Media Player na-aha n'okpuru ika nke VideoLAN-abụghị uru nzukọ.
Key Akụkụ nke VLC Media
1. kacha ọhụrụ version dị bụ 2.2.1.
2. Mfe Interface, ngwa ngwa na Ike Media Player.
3. arụ ọrụ na niile nyiwe dị ka Windows, Mac, iOS, Linux na Unix.
4. Capable nke na-akpọ niile codecs na ọ fọrọ nke nta dịghị codec ngwugwu chọrọ.
5. Zuru free iji.
6. Capable ime media akakabarede na ọbụna gụgharia.
7. Size nke VLC Media Players dị nnọọ iche dabeere na Platform, ka ihe atụ na Windows VLC Media ọkpụkpọ 2.2.1 bụ nke 28 MB, 34 MB on Mac, na ndị dị otú ahụ.
8. akwado fọrọ nke nta niile formats sitere na site 3GP, ASF, AVI, DVR-MS, Flv, Matroska, Midi, QuickTime File Format, MP4, Ogg, OGM, WAV, MPEG-2 (Njedebe, PS, TS, PVA, MP3) , AIFF, Raw audio, Raw DV, MXF, VOB, RM, DVD-Video, VCD, SVCD, CD Audio, DVB, Cinepak, Dirac, DV, H.263, H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / MPEG HEVC, HuffYUV, Indeo 3, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, RealVideo 3 & 4, Sorenson, Theora, VC-1, VP5, VP6, VP8, VP9, DNxHD, ProRes na ụfọdụ WMV ka AAC, AC3, ALAC, AMR, DTS, DV Audio, XM, FLAC, Ọ, MACE, Mod, Enwe si Audio, MP3, Opus, PLS, QCP, QDM2 / QDMC, RealAudio, Speex, Screamtracker 3 / S3M, TTA, Vorbis, WavPack, WMA (WMA 1/2, WMA 3 ikpe) na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nkebi nke 2: MPC (Media Player Omuma) Media Player
MPC-HC Media Player, ọzọ fechaa Player na a osompi nke VLC Media Player, bụkwa na-emeghe isi Player dị nnọọ ka VLC Media Player.
1. kacha ọhụrụ Version dị bụ 1.7.8
2. Works naanị na Windows
3. nwekwara ike-eji dị ka DVB Player
4. Zuru free iji
5. Size nke Media Player bụ na gburugburu 18 MB
6.-akwado ndị niile nkịtị video na ọdịyo faịlụ formats maka playback
Nkebi nke 3: 3 ma ama reviews banyere MPC
Mgbe anyị na-anakọta 3 ama reviews banyere MPC, anyị nwere ike ịhụ ndị a na
Lee ndị screenshots maka otu.
1. "Serious mpi megide VLC, ugbu a, ọ bụrụ na ọ ga-dị egwu .iso faịlụ Ọ ga-enwe zuru okè: D"
Njikọ URL: http://sourceforge.net/projects/mpc-hc/reviews/
2. "Best video nkwado: MPC-HC"
Njikọ URL: http://www.techhive.com/article/2892383/which-is-the-better-free-video-player-mpc-hc-176-vs-vlc-22.html
3. "Great ngwaahịa, ngwa ngwa na mfe"
Njikọ URL: http://download.cnet.com/Media-Player-Classic-Home-Cinema/3000-13632_4-199375.html
Mmechi: On mmechi akụkụ, anyị nwere ike ikwu na Media Player Omuma esetịpụ ụfọdụ ebe n'etiti ọrụ na-ewere ya dị nnọọ mfe iji, mfe iji wụnye, anaghị ezu ohere. Ma ebe ọ bụ na ọrụ na-ejedebeghị ka software bụ nnọọ ejedebeghị Windows ọrụ, Media Player Omuma lags n'azụ na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ ụwa. Mgbe, anyị na-aga site na ọtụtụ reviews, anyị nwere ike na-abata na ọgwụgwụ na, Media Player Omuma esetịpụ ụfọdụ onu n'elu VLC Media Player na okwu nke visual, ma ebe ọ bụ na nhọrọ na-ejedebeghị maka ọrụ, ọtụtụ ndị agbasaghị nwere VLC Media Player na dịghị ihe ọzọ na ha na usoro. Onwe-ekwu okwu, Media na-a klas mgbe anyị na-ekwu nke video akụkụ, na ọbụna, mgbe m na-eche nsogbu na VLC Player na akụkụ ndị a, m ozugbo ịgbanwee gaa na Media Player Omuma.
Akpụ akpụ kwupụta 3 ama reviews maka VLC Media Player, anyị pụrụ ikwu na nke a Media Player siworo nhọrọ kasị mma maka ndị niile gburugburu ụwa. Lee snapshots na reviews maka otu.
1. "naanị otu mkpa maka fọrọ nke nta ụdị ọ bụla nke mgbasa ozi"
Njikọ URL: http://www.snapfiles.com/userreviews/110561/videolan.html
2. "VLC dị oké mkpa ...... .."
Njikọ URL: http://www.macupdate.com/app/mac/5758/vlc-media-player
3. "Best gụgharia nkwado: VLC
- Mmechi: Ebe ọ bụ na, VLC Media Player bụ a vasatail ọkpụkpọ, nke na-arụ ọrụ dị iche iche n'elu ikpo okwu, na VLC Media Player, esetịpụ ụfọdụ onu n'elu Media Player Omuma. Ọbụna, na mbara faịlụ Ọkpụkpọ nkwado bụ nnọọ ihe ọzọ mere oké ịhụnanya nke ndị kwupụta VLC Media Player. The Audio akụkụ nke VLC Media bụ nnọọ mma ka Media Player Omuma. Mgbe MPC bụ nnọọ n'ihi na Windows, Nke a na esetịpụ oké uru maka VLC Media. Nwere ike ịbụ na-eme n'ọdịnihu, Media Player amalite-arụ ọrụ na ndị ọzọ na nyiwe na a ga-abụ oké mpi n'ihu. Ịtụle ojiji akụkụ, Media Player Omuma nwere ụfọdụ kwesịrị ịrịba ama ihe karịrị VLC media. The kpọmkwem tụnyere ego n'anya diluted bụrụ na ị bụghị windows ọrụ. Ma, n'ihi na Windows ọrụ, Media Player kpochapụwo na VLC Media, ma bụ ndị mmeri. Ọbụna, m nwere ma ndị Media Players! Ugbu a, ọ bụ gị na-ahọrọ, ihe iji! The Ball dị gị ikpe, na ebe ọ bụ ma dị maka free, ọ bụ gị ga-eme nhọrọ. Cheta, Mac na ndị ọzọ na nyiwe ụmụ okorobịa, ọ dịghị mkpa echiche dị ka e nweghị Media Player Omuma maka ha!
5 Atụmatụ banyere Windows Media Player na windows 7/8
> Resource> Windows> MPC vs VLC Media Player, nke bụ mma otu?